Yaa Ka Masuul Ah Dayaca Saraakiisha Ciidanka Booliska Somaliland! W/Q Siciid Maxamuud Gahayr
Sunday September 03, 2017 - 02:42:54 in Maqaallo by Super Admin
Mid ka mid ah ehelkiisa oo ka warrama siduu wax u noqday.........
22kii March 2012ka ayuu Marxuun Maxamed Saqadhi Dubad ku geeriyooday cusbitaal ku yaalla magaalada Dubaay ee dalka Isu-tagga Imaaraadka Carabta. Walaw ay qoyskiisu doorbideen in lagu aaso carri shisheeye, waxa niyad-jabka keenay oo Taliyaha dayacay qarankii iyo xukuumaddii uu masuuliyadda u hayay. Madaxweyne Siilaanyo oo xanuunkiisa ka gaabsaday ayaa geeridiisa kaddib yidhi"Waxa uu ahaa geesi nagu banneenay kaalin adag”.
Aniga oo dhaliilaya habdhaqankaas, meerisyo ku jiray tix ‘dib-qallooc” la dhaho ayaa ahaa:
"Docdi Saqadhi naga awdi jiray,waw darsanaynnaaye”
Danab iyo halyey buu ahaa”, duurxulkiyo oohin
Darayiyo jirroo wada dugsaday, lama daryeelayne
Dubay maalin lagu aasaybaaad, deeqo fidisaaye
Dayaca haysta ciidanka Somaliland waxa tusaale nool u ah xaaladda murugsan ee uu ku jiro Taliyihii Saldhigga Qudhac-dheer ee magaalada Hargeysa Gaashaanle Cabdi Kayd Halab oo saymo u galay sugidda amniga. Sarkaalkani waxa uu ku 20kii Mey 2017ka ku dhaawacmay fal ka dhacay degmada Maxamuud Haybe ee Caasimadda Hargeysa, waxaanay xabbado kaga dhaceen caloosha. Isaga oo xaaladdiisu liidato ayuu muddo Hargeysa yaallay, markii dambe waxa loo diray Addisababa, xukuumadduna waxtarkiisa xil iskama saarin.
Kaddib markii uu qol Itoobiya ah muddo jiifay ee xaalkiisu halis galay ayaa dhakhtar la geeyay, ugu dambayntiina xigaalkiisa ayaa Hindiya ugu diray kaalmo ay ururiyeen. Marka laga yimaaddo ciddii ay isku dhaceen ciidanka booliska, waxa gudaha la dhigay illaa haddana aan dhinacna u dhicin xadhigga walaalka iyo wiil uu dhalay Suldaanka Guud ee Beelaha Somaliland oo kala ah Muuse Suldaan Cabdiqaaddir Suldaan Cabdillaahi iyo Daauud Suldaan Maxamed Suldaan Cabdiqaaddir. Ma qaran ayuu difaacayay mise qabiil? Ma dawlad ayuu ka tirsanaa oo daryeelkiisu saarnaa mise deegaan gooni ah?
Gaashaanle Aadan Keyse Ismaaciil waxa uu ahaa Taliye ku-xigeenka Booliska Ee Saldhigga Dhexe ee Burco, 31kii Mey 2017ka ayuu si xun ugu waxyeelloobay rasaas ay is weydaarsadeen booliska iyo koox doonaysay in ay Burco soo geliyaan Maandooriyaha Khamrigu. Walaw uu u dhabar-jabay gudashada masuuliyaddii saarnayd, haddana wax uu geyo iyo wax u dhaw midna looguma abaal-gudin. Inkasta oo uu hagar-baxay, waa la hagraday.
Mid ka mid ah ehelkiisa oo ka warrama siduu wax u noqday, sida loo hagraday iyo xaaladda la deristay ayaa yidhi"Waxa uu dhaawacmay iyada oo ay ciidanka boolisku qabanayaan dad khamri soo gelinaya Burco oo shacab ah. Ninkii waxyeellada geystayna lama qabannin. Rasaastu waxa ay kaga dhacday laf-dhabarta, sarkaalkani waxa uu muddo yaallay Burco. Waxa loo soo gudbiyay Hargeysa, ugu dambayntiina waxa loo duuliyay Hindiya. Waxa ku baxay qarash dhan $46,000, kaas oo ah qaadhaan ay sokeeyuhu ururiyeen. Walaw ay xukuumaddu ballan-qaadday in ay bixinayso $10,000, illaa hadda waxba ma ay bixin.
Saddex dhakhtar oo Hindiya ahi waxa ay yidhaahdeen "Waxa aanu filaynnaa in ay jirto fursad 30% ah oo uu ku samata-bixi karo. Miyaanu qalliin samaynnaa annaga oo idiin haynna rejadaas kooban?”. Xigaalku waxa ay doorbideen in loo soo saaro dal-ku-gal Jarmalka ah si halkaas xaaladdiisa loogula tacaalo”
Ugu dambayntii waxa aan Sarreeye Guuto Cabdillaahi Fadal Iimaan weydiin lahaa: yaa ka masuul ah daryeelka saraakiishan? Yaa lagu hallaynayaa Ilaahay kaddib?